शरीरको यस्तो अबस्था भएमा, को’रोना भए पनि नतिजामा नेगेटिभ देखिन्छ ! – Butwal Sandesh
शरीरको यस्तो अबस्था भएमा, को’रोना भए पनि नतिजामा नेगेटिभ देखिन्छ !
डा. सुरज भट्टराई,रूपन्देहीस्थित बुटवल को’रोना विशेष (अस्थायी) अस्पतालमा भ’र्ना गरिएका युवकको गत हप्ता मृ’त्यु भयो। त्यसअघि प’रीक्षणका लागि काठमाडौंको टेकुस्थित राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा उनको स्वा’ब पठाइएको थियो र उनको मृ’ त्यु भइसकेपछि नतिजा (रि’पोर्ट) आयो, जसमा को’रोना भाइरस नेगेटिभ अर्थात् नरहेको देखाइयो। तर बुटवल को’रोना अस्पतालमा फो’कल प’र्सनका रूपमा कार्यरत चि’कित्सकले रि’पोर्ट ने’गेटिभ आए पनि बि’रामीमा जुन ज’टिल लक्षण देखिएका थिए, त्यसआधारमा उनलाई को’रोना भाइरसको सं क्रमण थिएन भनेर नि’श्चित गर्न नसकिने बताएका छन्।
अर्थात् उनले को’रोना प’रीक्षण प्रणालीलाई नै चु’नौती दिएका छन्। यसबाट प्रश्न उठेको छ- को’रोना पत्ता लगाउन गरिने पी’सीआर प’रीक्षण पनि ग’ल्ती हुन सक्छ? गत फेब्रुअरीमा चीनको हुबेई प्रान्तको एक अस्पतालमा गरिएको एक अध्ययनले पनि यस्ता केही घ’टना देखाएका छन्। चिकित्सकले सं क्रमित भनेर भ’र्ना गरेका ६ सय १० बि’रामीमध्ये ३ सय ८२ जनाको पहिलो पी’सीआर रि’पोर्ट को’रोना ने’गेटिभ आएका थिए। दोस्रोपटक प’रीक्षण गर्दा तीमध्ये १२ प्रतिशत बि’रामीमा को’रोना भाइरस पो’जेटिभ अर्थात् सं क्रमण देखियो।
चौथो पटकसम्म प’रीक्षण गरेपछि मात्रै सबै ३ सय ८२ जनाकै रि’पोर्ट पो’जेटिभ आयो। त्यसैले एकपटक मात्रै प’रीक्षण गर्दा को’रोना छ/छैन, पत्ता न’लाग्न सक्छ। पटकपटक प’रीक्षण गर्नुपर्ने हु्न्छ। भा’इरसको संक्रमण रहेको तर प’रीक्षण गर्दा नदेखिने यो अवस्थालाई ‘फ’ल्स ने’गेटिभ’ भन्ने गरिन्छ। चीनका चिकित्सकले कुनै बि’रामी को’रोना भाइरस (को’भिड-१९) बाट सं’क्रमित छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउन सबैभन्दा पहिले छातीको सी’टी–स्क्यान गरेका थिए। सार्वजनिक घ’टना हेर्ने हो भने संक्रमितमध्ये ९६ प्रतिशत बि’रामीको सी’टी-स्क्यानमा नि’मोनिया भएको देखिन्छ।
यसले चि’कित्सक/स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि त्यस्ता बि’रामीको उपचार गर्दा आफू सु’रक्षित हुन थप स’तर्कता अपनाउन पनि आधार दिन्छ। तर हाम्रा अस्पतालमा त्यसरी सी’टी-स्क्यान गर्ने सु’विधा छैन। भा’इरसबाट संक्रमित हो/होइन भनेर निश्चित गर्न हामीले प्रयोग गरिरहेको प’द्धतिमार्फत ल्या’बको रि’पोर्ट आउन समय लाग्छ। तसर्थ पटकपटक प’रीक्षण आवश्यक परेको हो। नमुना सं’कलन पद्धति, सं’क्रमण अवस्थाअ’नुरूप न’मुनाको प्रकार र ल्या’ब प’रीक्षण प्रक्रियामध्ये कुनै एकमा त्रु’टिका कारण रि’पोर्ट फ’ल्स नेगेटिभ अर्थात् भा’इरस नरहेको आउने गर्छ।
यस लेखमा यी तीनवटै प’क्ष के’लाउन प्रयास गरिएको छ। नमुना संकलन राम्रोसँग हुन नसक्दा स्वा’बमा भाइरस देखिँदै नदेखिने वा आवश्यक मात्रामा नआउने हुन सक्छ। यस्तो हुँदा पनि सं’क्रमित व्यक्तिको रि’पोर्ट ने’गेटिभ देखिन सक्छ। विश्वभर नै नाक वा मुखको भित्री भागबाट स्वा’ब (त’रल पदार्थ) संकलन गरिन्छ। तसर्थ सं’कलक व्यक्तिले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भने न’मुना सं’कलन गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिको नाक वा मुख भित्रको सही स्थानसम्म स्वा’ब नि’काल्ने औ’जार पुग्यो कि पुगेन? एउटा मसिनो काठ वा प्ला’स्टिकको टु’प्पोमा क’पास भएको औ’जारले स्वा’ब निकालिन्छ।
तर काठको औ’जारले निकाल्दा न’मुनामा भाइरस भएको ख’ण्डमा त्यसको आ’रएनए नि’ष्क्रिय हुने गरेको केही अनुसन्धानले देखाएका छन्। त्यसैले प्ला’स्टिकको स्वा’ब-औ’जार प्रयोग गर्नु वि’ज्ञान-सम्मत हुन्छ। उचित प’द्धति प्रयोग नगरी नाकबाट सिं’गान र मुखबाट र्‍या’ल निकालेर मात्र काम लाग्दैन। तसर्थ नमुना निकाल्ने व्यक्तिले यस पक्षमा बढी नै ध्यान दिन ज’रुरी छ। साथै त्यो नमुना (स्वा’ब) को भ’ण्डारण, चि’स्यान वा ओ’सारपसार गर्दा पनि ध्यान दिन आवश्यक छ। कहीं पनि त्रु’टि भयो भने भाइरसको आ’रएनए छ्या’लब्याल वा क्ष’तविक्षत (आ’रएनए डि’ग्रिडेसन) हुन सक्छ र परीक्षणको परिणाम ने’गेटिभ आउन सक्छ।
सं क्रमित व्यक्ति रो गको कुन अवस्थामा रहेका बेला न’मुना संकलन गरिएको हो भन्ने कुराले पनि प’रीक्षण परिणाम (रि’पोर्ट) मा फरक पार्छ। कुनै व्यक्ति प्रा’रम्भिक चरणको सं क्रमणमा छ भने पी’सीआर प’रीक्षण ‘फ’ल्स ने’गेटिभ’ आउन सक्छ। त्यस्तै शरीरको कुन स्थानबाट नमुना नि’कालियो भन्ने कुराले पनि उत्तिकै महत्व राख्छ। लक्षण नदेखिएका वा कम सि’किस्त बि’रामीको ह’कमा नाक वा मुखको भित्री भागबाट निकालिएको नमुनाले ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म सही नजिता दिन सक्छ। धेरै सि’किस्त बि ’रामीको हकमा श्वा’सनली वा फोक्सोबाट सं’कलन गरिएको नमुना (त’रल पदार्थ) ले ९० देखि ९५ प्रतिशतसम्म सही परिणाम (रिपोर्ट) दिन सक्छ।
जसलाई प’रीक्षणको क्लि’निकल से’न्सिटिभिटी भनिन्छ। सबै बि’रामीको फो’क्सो वा श्वा’सनलीबाट न’मुना निकाल्न स’म्भव हुँदैन, आ’ईसीयूमा भ’र्ना भएकाको मात्र यसो गर्न सम्भव हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सं’गठन (ड’ब्ल्यूएअचो) ले नाक र मुख, श्वा’सनली र फोक्सोबाट नि’कालिएको स्वा’ब र ख’कार गरी ३ प्रकारका न’मुना को’रोना प’रीक्षणका लागि उपयुक्त हुने बताएको छ। तर ख’कारको प’रीक्षण कति ठीक भन्ने विषयमा खा’सै अनुसन्धान भएको छैन। संकलन गरिएको नमुना आ’धिकारिक ल्या’बमा ल्याएपछि त्यसलाई २ चरणमा परीक्षण गरिन्छ।
पहिलो चरणमा न’मुनामा भएको आरएनए छुट्याइन्छ, त्यसलाई आरएनए ए’क्सट्राक्सन भनिन्छ। दोस्रो चरणमा आ’रएनएको आ’नुवांशिक तत्व (जे’नेटिक क’म्पोनेन्ट) मा वृद्धि (ए’मफ्लिपिकेसन) गरिन्छ, त्यसलाई पी’सीआर भनिन्छ। त्यसरी धेरै संख्यामा वृद्धि गरिएको आ’नुवांशिक तत्व को’भिड-१९-विशेष प्रा’इमरसँग जु’धाइन्छ। संक्रमणको शं’का गरिएका व्यक्तिको न’मुनामा को’रोना भाइरसको आ’नुवांशिक तत्व छैन भने कुनै प्रतिक्रिया आउँदैन र न’तिजा ने’गेटिभ आउँछ। तर संक्रमित व्यक्तिको न’मुनामा को’रोना भाइरसको आ’नुवांशिक तत्व छ भने त्यो प्रा’इमरको तत्वसँग मेल खान्छ र एउटा रं’गिन चित्र (फ्लो’रेसेन्स) देखिन्छ।
जसले नै प’रिणाम पो’जेटिभ भएको पुष्टि गर्छ। १ ए’मएल न’मुना लिटरको हजार भाग मा भा’इरसको संख्या ५ सयभन्दा कम भयो भने पनि संक्रमित व्यक्तिको पी’सीआर परीक्षण ने’गेटिभ आउन सक्छ, यो नै यस प’द्धतिको प्रा’विधिक त्रु’टि हो। यसैले सं क्रमणबारे गरिने प’रीक्षणका तीनवटै चरण राम्रोसँग हुन जरुरी छ। अन्यथा प’रिणाम सही आउन सक्दैन। त्यसैले को’रोना सं क्रमित आ’शंका गरिएका बि’रामीको न’मुना एकपटक प’रीक्षण गर्दा पी’सीआर ने’गेटिभ देखायो भन्दैमा घर पठाउन मिल्दैन। अहिले को’रोना भाइरस प’रीक्षणमा प्रयोग गरिने रि’एजेन्टको विश्वभर अ’भाव छ।
थोरै मात्रै कम्पनीले यसको उत्पादन गरिरहेका छन्। त्यसको विकल्पमा अन्य प्रकारको पी’सीआर पद्धति आएका छन्। तर ती सबैले मान्यता पाएका छैनन्। थोरैले मात्रै पाएका छन्। रिएजेन्ट बचत गर्न एउटा विकल्प म’ल्टिप्लेक्स पी’सीआर प’द्धति पनि हुन सक्छ ।त्यसले को’भिड-१९ मात्रै नभएर अन्य भाइरसको पनि एकैपटक परीक्षण गर्छ। जसले को’भिड-१९सँगै अन्य किसिमका को’रोना, सा’र्स, म’र्स, इ’न्फ्लुएन्जा, रे’स्पिरेटोरी सि’नसाइटिएल भाइरस (आ’रएसभी) र अन्य भाइरसको एकैपटक प’रीक्षण गर्न सक्छ ।चीनमा को’रोना म’हामारी बीचमै हा’न्ता भन्ने भा’इरसले मानिसको मृ’त्यु भएको छ।
को’रोना जाँ’चका लागि विभिन्न नयाँ कि’टको उत्पादन पनि गरिएको छ, विशेषगरी द्रुत (र्‍या’पिड) नतिजा दिने खालका। दक्षिण कोरियाले म’हामारी सुरु हुनेबित्तिकै निजी क्षेत्रका उत्पादकलाई बोलाएर र्‍या’पिड कि’ट उत्पादन गर्न लगायो। त्यहाँको सरकारले कडा रूपमा नि’यमन गर्‍यो। अब अमेरिकाले पनि त्यसै गर्ने सम्भावना छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित पत्रकार स’म्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकले र्‍या’पिड डा’इगोनिस्ट कि’ट (आ’रडीटी) ले काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने प्र’श्नमा देशमा म’हामारी भइहालेको ख’ण्डमा प्रयोग गर्न त्यस्तो कि’ट ल्याएको र त्यसको गुणस्तरका विषयमा जाँच गरिने जानकारी दिएका छन्।
उक्त कि’टको से’न्सिटिभिटी र स्पे’सिफिसिटीलाई ध्यान दिइने उनको भनाइ छ। सय जना संक्रमितको स्वा’ब प’रीक्षण गर्दा त्यस कि’टले कति जनालाई भा’इरस पो’जेटिभ देखायो, त्यो प्रतिशतलाई से’न्सेटिभिटी भनिन्छ। त्यसैगरी संक्रमण नभएका सय व्यक्तिको न’मुना जाँच्दा कति जनालाई कि’टले ने’गेटिभ नै देखायो, त्यो प्रतिशतलाई स्पे’सिफिसिटी भनिन्छ। कि’ट नमुना प’रीक्षणका लागि उपयुक्त सा’बित हुन उल्लिखित दुवैको अंक ७० देखि ९० प्रतिशतसम्म वा यसभन्दा बढी हुनुपर्ने हुन्छ। यसबारे विस्तृत जानकारी प्राय: कि’टमै उल्लेख हुन्छ।
अहिले को’रोना भाइरस परीक्षणको द्रुत न’तिजा दिने भनेर आएको कि’ट पनि पी’सीआरकै सानो रूप हो। विकसित देशमा १५ मिनेट वा कम समयभित्रै नतिजा प्राप्त गर्न सकिने खालका कि’ट प्रशस्त मात्रामा उत्पादन भइरहेको अवस्था छ। तर ड’ब्ल्यूएचओले त्यस्ता कि’ट उत्पादक केही कम्पनीलाई मात्र मान्यता दिएको छ। संक्रमण शंका गरिएका व्यक्तिको नाक वा मुखको भित्री भागको तरल प’दार्थ र विशेष प्रकारको रसायन मिश्रण गरेर कि’टमा हा’लिन्छ र संक्रमण भए/नभएको छु्’ट्याउने काम गरिन्छ। तर को’भिड-१९ परीक्षणका सन्दर्भमा आवश्यक अनुसन्धान र तथ्य अ’भावमा र्‍या’पिड डा’इगोनिस्ट कि’टलाई भरपर्दो मानिँदैन।
को’रोना परीक्षण गर्ने अन्य विधि पनि छन्, जस्तैः ए’न्टिबडी र ए’न्टिजिन प’रीक्षण। यी दुवै प’रीक्षणका लागि सं क्रमित व्यक्तिको र’गत आवश्यक पर्छ। पी’सीआरले श’रीरमा तत्काल भएको भा’इरस सं’क्रमण देखाउँछ भने ए’न्टिबडीले पु’रानो संक्रमण र त्यसवि’रुद्ध शरीरले गरेको प्र’तिरक्षात्मक अवस्था जनाउँछ। तर ए’न्टिजिनबारे अनुसन्धान जा’री नै छ। को’भिड-१९ सँग मि’ल्दाजुल्दा लक्षण देखिएका बि’रामीको मृ’त्यु हुँदा उनको राम्रोसँग प’रीक्षण गरियो/गरिएन भनेर पनि प्रश्न उठेको छ। मृ’ त्युको कारण पत्ता लगाउन पनि पी’सीआर परीक्षण महत्वपूर्ण हुन्छ।
मृ’तकको शरीरबाट के कस्तो न’मुना लिइयो वा दोहो/तेहेर्‍याएर प’रीक्षण गरियो/गरिएन भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै ग’हन हुन्छ। स्क्रि’निङ गर्दाको जस्तै अन्य अंगको न’मुना लिइयो वा लिइएन भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। मृ’ त्यु भएका व्यक्तिमा भाइरस संक्रमण रहेको पत्ता लगाउन सकिएन भने वा रि’पोर्ट ‘फ’ल्स नो’गेटिभ’ आएको रहेछ भने त्यसले परिवार र साथीभाइलाई जो’खिममा पार्ने स’म्भावना बढी हुन्छ। तसर्थ एकपल्टको प’रीक्षण रि’पोर्ट ने’गेटिभ आयो भन्दैमा ढु’क्क भएर बस्न मिल्दैन। पो’स्टमार्टममार्फत अन्य अं’गको न’मुनासमेत लिएर प’रीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ।
को’भिड-१९ को सन्दर्भमा मृ तकको नाक वा मुखभित्रको न’मुना मात्रै होइन, पो’स्टमार्टममार्फत फोक्सोको त’न्तुसमेत सं’कलन गरेर पी’सीआर परीक्षण गराउन सकिन्छ। विकसित देशमा त मृ’त्युको कारण पत्ता लगाउन छातीको सी’टी-स्क्यान पनि गर्ने गरिन्छ ।तर ती प्रक्रियामा पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक र अन्य ज’टिलता देखिन आउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा मृ’तकको शरीर पूरै चि’रफार नगरी फो’क्सोको न’मुना मात्रै लिने गरी बा’योस्पी गर्न सकिन्छ। न्यू’न क्ष’तिबाट बा’योस्पी न’मुना संकलन गर्ने यो पद्धति नेपालमै गण्डकी प्रदेशका विभिन्न स्वास्थ्य सं’स्थामा अनुसन्धान क्रममा छ।
(बे’लायतको लन्डन स्कुल अफ हा’इजिन ए’न्ड ट्रपिकल मे’डिसिनबाट विश्व स्वास्थ्य र सं’क्रामक रो’ग विषयमा स्ना’तकोत्तर गरेका डा. सुरज भट्टराई नेपालस्थित अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान सं’स्था ग्लो’बल इ’न्स्टिच्युट फ’र इ’न्टरडिसिप्लिनरी स्’टडिज जी’आईएसएसमा आ’बद्ध छन्। उनी गण्डकी प्रदेशमा ए’मआईटीएस टो’ली ने’तृत्वकर्ता हुन्।)